बिचित्र विश्व | नेपाल आज
पुरुष गर्भवती भएर हिँडेपछि...
असोज–१९ । जापानमा गर्भवती महिलाहरुका लागि अनौठो जागरुकता अभियान संचालन भएको छ । उक्त अभियान तीन जना पुरुष गभर्नरले सुरु गरेका छन् जसले आम मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो सहयोग हुने ...
चीनमा जन्मियो दुबै आँखा नभएको बच्चा
चीनमा एउटा यस्तो बच्चा जन्मिएको छ जसका दुबै आँखा नै छैनन् । यस्तो देख्दा डाक्टरहरु पनि अचम्मित भएका छन् । चीनको गुआंगझोउमा उक्त बच्चाको जन्म भएको हो । सेप्टेम्बर २० का दिन ...
दुई गुच्छा कपालको मूल्य ४० हजार डलरमा बिक्रि
असोज १८ । तपाईं आफूलाई मन परेको सेलिब्रेटीको सामान किन्न पाउँदा कति रकम तिर्न तयार हुनुहुन्छ ? भर्खरै अभिनेतृ मर्लिन मुनरोको अलिकति कपालको मूल्य उनका एक फ्यानले ४० हजार डलरमा किनेका ...
छात्रवृति पाउन कुमारित्व परिक्षण गर्नु पर्ने
एजेन्सी । गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने चलन हुन्छ प्रायः । विश्वभरमै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणको मापदण्ड यहीँ हो । तर दुनियमा एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ छात्राहरुले विद्यालयमा छात्रवृत्ति ...
१ मिनेटमा ७९ जना मानिससँग हात मिलाएर गिनिज बुक अफ वल्र्डमा रेकर्ड दर्ता
असोज - १६ । वास्तवमा कसैलाई अगाँलो मार्नु माया तथा स्नेहको प्रतिक हो तर के तपाईलाई थाहा छ अगाँलो मारेर पनि वल्र्ड रेकर्ड बनाउन सकिन्छ । भारतको हैदराबादमा यस्तै एउटा घटना भएको ...
बंगलादेशमा एउटा अचम्मको बच्चा जन्मिएको छ जसले चिकित्सा बिज्ञान नै अचम्भित बनाएको छ । भर्खरै जन्मिएको बच्चा ८० बर्षीया बृद्धजस्तो देखिन्छ, उसका अनुहार चाउरी परेका छन, शरीरभरी रौहरु उम्रिएका छन् र ...
युवककाे यौनांगमा पटक - पटक माकुराले टोकेपछि...
असोज १५ । अस्ट्रेलियाका बिल्डर जोर्डन नामका युवकलाई यौनांगमा पटक पटक माकुराले टोक्ने गरेको छ । जोर्डनका अनुसार करिब ५ महिना पहिले रेडब्याक जातको माकुराले उनको यौनांगमा टोकेको थियो । केही दिनअघि ...
कपिलवस्तुमा दुईवटा टाउको भएको शिशुको जन्म (फाेटाे फिचर)
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा एक महिलाले दुईवटा टाउको भएको शिशुलाई जन्म दिएकी छिन् । जिल्लाको गणेशपुर ८, दत्तपुरका जाबेद पठानकी ३५ वर्षीय श्रीमती सुबिया पठानले यस्तो विचित्र शिशु जन्माएकी हुन् । ...
३१ औला भएका बालक
चीनका एक बालकले जन्मिदै ३१ ओटा औला थिए । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा जन्मिएका बालकको आमाबाबुले शल्यक्रियामार्फत अनावश्यक औँला फाल्न चाहेका थिए । तर ति बालकको आमबाबुले पैसा अभावका कारण ...
इमान्दार बिरालो, जसले ९ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको छ
असोज ११ । कुनै पनि सरकारी तथा निजी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु विभिन्न बहाना तथा निहु पारेर विदामा बस्ने गर्दछन् । केही कर्मचारीहरु आपतकालीन काम परेर कार्यालयबाट विदा लिन्छन् त केही ...
श्रीमतीको बिक्री मूल्य ७० लाख
असोज – १० । बेलायतका एकजना व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीलाई एक अनलाईन सपिङमा विक्रीमा राखेपछि अहिले चर्चित बनेको छ । सिमन नामका व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीको फोटो श्रीमतीको अनुमति बिना अनलाईन सपिङमा राखेका ...
पाइपबाटै घरघरमा बियर
असोज ६ । जर्मनीमा घर, घरमा ग्याँस मात्र होइन बिएर पनि पुर्याउने गरिन्छ । जर्मनीको सिको गरेर अन्य केही देशमले पनि आफ्ना नागरिकलाई यस्तो सुझाब दिएका छन् । जर्मनीको बियर निकै ...
जुठो चुइँगम लाखौमा लिलाम
एजेन्सी । सेलिब्रेटीका लुगा, उनीहरुका चिठी, हस्ताक्षर आदि लिलाम हुने कुरा बारम्बार सुन्ने गरिन्छ । तर, सेलिब्रेटीले चपाएको चुइँगम पनि कुनबेला लाखौमा लिलाम भएको भियो भन्ने सुन्दा छक्क पर्नु स्वभाविक हो ...
बडिबिल्डर साँढे जसको कसरत बिना मांसपेशी छुट्टिएको देखिन्छ
असोज – ५ । बेल्जियम बुल (साँढे)लाई बडिबिल्डर बुलको नामले समेल चिनिने गरिन्छ । मानिसको झैँ मांसपेशी छुट्टिएको देखिने हुनाले यसको नाम बडिबिल्डिङ राखिएको हो, जुन सामान्य साँढे भने होइन । यी साँढे ...
चीनमा कुकुरका लागि ८ वटा आइफोन ७ एस
असोज - ५ । आइफोन ७ एसले विश्व बजार तताइरहेको बेलामा फेरि कुकुरलाई आठ ओटा आइफोन ७ एस किनिदिएको समाचारले चर्चा कमाएको छ । चीनमा एक धनाढ्य व्यक्तिका छोराले आफूले पालेको ...
९ सय ५८ रुपैँया भारु खर्चिएपछि नरेन्द्र मोदी २४ घण्टा साथैमा
असोज ५ । केही महिना अघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ बिक्रिमा रहेको समाचार सेलाउन नपाउदै अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि बिक्रिमा राखिएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको मूल्य १ करोड तोकिएको थियो ...
६ वर्षिय बालक गर्भवती !
एजेन्सी । ६ वर्षकै उमेरमा र त्यो पनि बालक गर्भवती भएको कुरा दुनियामा कहीँ कसैले नपत्याउने कुरा हो । तर भारतको वाराणसीमा भने एक ६ वर्षीय बालकको पेटमा मानव भ्रुण फेला ...
वैँशले उन्मुक्त हुँदा हुँदै पनि पाउदैनन् युवतीले विहे गर्ने युवा
वैँशले उन्मुक्त भएका हरेक युवतीहरुको सपना हुन्छ की उनको विवाह धुमधामसँग होस् । तर दुनियामा एउटा यस्तो ठाउँ छ हाँ महिलाहरुका लागि बिहे गर्ने कुरा निकै कठीन कार्यको रुपमा रहेको छ ...
एक युवालाई सिक्रिले बाँधेर कुकुर झै सडकमा हिडाएपछि...
असोज ४ । चीनको फुजियान प्रान्तस्थित फुझोउ शहरमा गत साता एउटी युवतीले कुकुर बाँध्ने सिक्रीले बाँधेर एक युवकलाई बाटोमा डोहोर्याइन् । घाँटीमा सिक्री बाँधिएका ती युवक मालिकको इशारामा कुकुर हिँडेझैँ गरी ...
गालाप्यागोस कछुवाको ५० औँं जन्मदिवस मनाइयो
असोज - ३ । अस्ट्रेलियाको पर्थ महानगरमा अवस्थित पर्थ चिडियाखानामा राखिएको ग्यालाप्यागोस जातको सेर्रो नामको एउटा भीमकाय कछुवाको ५० औं जन्मदिवस धुमधामका साथ मनाइयो । उक्त भाले कछुवा ४९ वर्ष पूरा गरी आजका ...